့မြန်မာမွတ်ဆလင်မ်တို့ စည်းလုံးမှုသည်…အမိမြန်မာပြည် တိုးတက်မှု၏ အဖိုးတန်ထောက်တိုင်တစ်ခု…… - News @ M-Media
in မြန်မာသတင်း — October 10, 2018
(ဒေါက်တာ သိန်းမိုးဝင်း ရေးသားသည်)
မြန်မာဆိုသည့်ဝေါဟာရသည် မြန်မာပြည်နယ်နမိတ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော လူမျိူးစုအားလုံးကို ခြုံငုံခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိတို့နှစ်သက်ရာ ဘာသာတရားများ ကိုးကွယ်နေထိုင်ကြသည်။ မိခင် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သည့် မြန်မာ-မူဆလင်ဆိုသည် ပေါက်ဖွားလာခဲ့သည်။ ဤစာတမ်းတွင် ဆက်လက်၍ မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းနေရသော အခက်အခဲများ၊ အတန်းအစားမတူသည့်သဖွယ် ခွဲခြား ပုံဖော်ခံနေရမှုများ၊ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ လျှော့ကျလာမှုများ၊ အခြားဘာသာဝင်အချိူ့ဘက်မှ အမြင်သဘောထား၊ အစိတ်စိတ်အမွှာအမွှာ ဖြစ်နေသည့် မြန်မာ-မူဆလင် အစုအဖွဲ့အားလုံးကို အင်အားအဖြစ် စုစည်းရန်လိုအပ်မှု၊ မြန်မာ-မူဆလင် ကိုယ်စားပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်နေမှုပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်၊ အဖွဲ့အစည်းအများ ပေါင်းစုပြီး တစ်ဖွဲ့အသွင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရရှိလာမည့် ကြီးမားသည့် အကျိူးဆက်များ၊ ဆောင်ရွက်သင့်သည့် ရေးရာ (၁၃)မျိူး (ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လ၀ကရေး၊ သတင်းပြန်ကြားရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူငယ်အရေး၊ စာပေ အနုပညာရေး၊ အားကစားရေး၊ ဥပဒေရေး၊ ကျင့်ဝတ်ထိမ်းသိမ်းရေး၊…စသဖြင့်) ထားရှိခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်ထိရောက်သည့် ၀န်ဆောင်မှုမျိူးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာသည့် Missions/Visions ရှိရန်လိုအပ်မှု၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် ရှိအပ်သည့် အရည်အချင်း၊ ထိုထိုသော အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့ အောင်မြင်လာနိုင်လျှင် စည်းလုံးပြီး စွမ်းပကားထက်သည့် မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာနိုင်ပြီး အမိမြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်ရေးအတွက်လည်း အဖိုးတန် ထောက်တိုင်တစ်ခု သဖွယ် စွမ်းဆောင်အကျိူးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း…. စသည်တို့ကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
မြန်မာ-မူဆလင်လူ့အဖွဲ့အစည်းအရေး ဆွေးနွေးတင်ပြဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာ့သမိုင်းဖြင့် အစချီရပေမည်။ ရှေးပဝေသဏီ တကောင်း၊ ပုဂံ၊ အင်းဝ၊ တောင်ငူ၊ ကုန်းဘောင်ခောတ် မင်းအဆက်ဆက်ကတည်းက မြန်မာပြည် နယ်နမိတ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၊ လူမျိူးစုံ၊ ဘာသာဓလေ့အစုံတို့သည် ယနေ့ထက်တိုင် ဖျောက်ဖျက်၍ မရနိုင်သော သမိုင်းသက်သေသာဓကများ ရှိဆဲဆိုသည်ကို မည်သူမျှ ငြင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သမိုင်းကြောင်းအရ အရှေ့တောင်အာရှ၏ အသက်ရှုပေါက်သဖွယ် strategic location တစ်ခုဖြစ်သည့် မြန်မာ့မြေသို့ ရပ်နီးရပ်ဝေး နိုင်ငံဒေသများမှလည်းပဲ ရေကြည်ရာမျက်နုရာ လာရောက်နေထိုင် ကူးလူးဆက်ဆံခဲ့ကြသည်ဆိုသည့် သမိုင်းအကိုးကား များစွာတွေ့နိုင်သည် (ပုံ-၁)။
ပုံ(၁)-သမိုင်းတစ်လျှောက် ရပ်နီးရပ်ဝေး နိုင်ငံများမှလူမျိူးစုံ မြန်မာ့မြေသို့ လာရောက်နေထိုင် ကူးလူးဆက်ဆံခဲ့ကြသည့် လမ်းအသွယ်သွယ်ပြ မြေပုံ
မြန်မာဆိုသည် တိုင်းပြည်၏ အမည်နာမ တစ်ခုအပြင် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော လူမျိူးစုအားလုံးကို ကိုယ်စားပြု ခြုံငုံ၍ သုံးနှုန်းခြင်း ဆိုသည်ကို ပြည်သူများ သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည်။ (ဥပမာ- Singapore နိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သူ နိုင်ငံသားအားလုံးကို Singaporean,…စသဖြင့်ပေါ့)။ ယခုကဲ့သို့ မြန်မာဆိုသည့် ဝေါဟာရကို အကျယ်တစ်ဝင့် ရှင်းလင်းပြရခြင်းမှာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ အချင်းချင်းသည် သွေးချင်းညီနောင်တွေဟူသော အသိဝင်စေရေး ရည်ရွယ်ဖော်ပြရခြင်းဖြစ်သည်။ ထင်သာမြင်သာအောင် ပမာဆိုရလျှင်- အောက်ပါ Playdoh လေးများကိုကြည့်ပါ။ playdoh (ပုံ-၂) တစ်ခုချင်းဆီပင်လျင် ingredients (ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းစုံ) ပေါင်းစပ်ထားရပြီး ထို Playdoh လေးများစွာ (ပုံ-၃) စုပေါင်းရောနှောကာ ဤကနေ့မြင်ရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မြေပုံ (ပုံ-၄) ဆိုတာဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဲဒီလိုဘဲ- လူတစ်မျိူး အသားတစ်ရောင် ဆိုသည်မဟုတ်ဘဲ လူမျိူးစုံတို့ ရောနှောနေထိုင်လာခဲ့ကြခြင်း (ပုံ-၂က) ၊ အသားအရောင် ရုပ်အသွင်အပြင် ရိုးရာဓလေ့ ဘာသာစကား များစွာ ကွာခြားမှုရှိသော်ငြားလည်း rich diversity (ပုံ-၃က) ဆိုသည့် မတူကွဲပြာမှု အင်အားအစုတို့နှင့် ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ထားသည့် မြန်မာ့မြေပေါ်မှ မြန်မာလူမျိူး (ပုံ-၄က) ဆိုသည်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကို ပုံဖေါ်ထားသည်။
ဒို့မြန်မာတွေဆိုသည် မိဘဘိုးဘွားဘီဘင် မြန်မာများမှ ပေါက်ဖွားလာကြပြီး ဤမြေမှာမွေး ဤရေသောက် ကြီးပြင်းလာကြသော မြန်မာ့သားသမီးများသာဖြစ်ကြသည်။ ရှေးမင်းအဆက်ဆက်ကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာတွေ မိမိတို့နှစ်သက်ယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားများ ကိုးကွယ်ခြင်းကို အမှုးပြု၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူများအား (မြန်မာ-ဗုဒ္ဓ)၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူများအား (မြန်မာ-အစ္စလာမ်)၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ကိုးကွယ်သူများအား (မြန်မာ-ဟိန္ဒူ)၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူများအား (မြန်မာ-ခရစ်ယာန်)၊ နတ်ကိုးကွယ်သူများ စသဖြင့် ဆိုလိုသည် (ပုံ-၅)။
ဤနေရာတွင် တစ်ခုသတိချပ်သင့်သည်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သည့် ပြည်တွင်းနေ မြန်မာများ (ယခင်အခေါ်အဝေါ် ဗမာ-မူဆလင်။ ။ဒီးဒုတ်ဂျာနယ် 04-02-1946) ယခုအခါ မြန်မာ-မူဆလင် ဟု သုံးနှုန်းကြသည်။ သို့ပါ၍ ရှေ့ဆက်ဖော်ပြချက်များတွင် မြန်မာ-မူဆလင်ဟုသာ ရည်ညွှန်းပါမည်။ (ပုံ-၅) တွင် ပမာဆိုထားသည့်အတိုင်း မြန်မာ-ကိုးကွယ် ဆိုသည့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးအတွင်း မြန်မာ-အစ္စလာမ် ဆိုသည်လည်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ခံယူစွဲမှတ်ထားကြဖို့ လွန်စွာအရေးကြီးသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သဖြင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ဒုတိယလူတန်းစားအသွင် ပုံဖော်နေခြင်း၊ အမုန်းတရားဖြန့်ဝေခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများ လွန်စွာမှားယွင်းသကဲ့သို့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးကို များစွာနစ်နာစေသည်။
တိုင်းပြည်၏ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ ကျော်ဖြတ်နေဆဲ အတက်အကျတိုင်းတွင် အများနည်းတူ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သည့် မြန်မာ-မူဆလင်တို့သည်လည်းပဲ ခါးစည်းခံ ရင်စည်းစံ တက်ညီလက်ညီရှိခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ် အချိူ့အတွင်း မြန်မာ-မူဆလင်တို့၏ ပြည်တွင်း အခမ်းဏ္ဍများ တစ်ဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်လာခဲ့ရခြင်း၊ မြန်မာဆိုသည့် အသိအောက်မှာ အားလုံးတန်းတူညီတူဖြစ်နေခဲ့ရာမှ (မူဆလင်) ဆိုသည့် ဝေါဟာရ ပေါင်းစပ်သည့်အခါ ကြုံတွေ့လာရသည့် အခက်အခဲများကို ဆက်လက် သုံးသပ်ကြည့်ပါရစေ။
1.4 မြန်မာ- မူဆလင်တို့ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများ
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း မြန်မာ-မူဆလင်တို့ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်ခဲပေါင်းများစွာက ခါးသီးလှသလို မြန်မာ-မူဆလင်ပါဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့်အမျှ ရှေ့ဆက်ကြုံတွေ့ရဦးမည့် အခက်ခဲစုံက စီးကြိုလျက်။ ဥပမာ-ဘာသာရေးဝတ်ပြုဆောင် (ဗလီ) နှင့် စာသင်ကျောင်းများတွင် ၀တ်ပြုခွင့်၊ စာသင်ကြားခွင့်၊ ပြင်ဆင်မွန်းမံခွင့်များအား တားဆီးပိတ်ပင်လာနေမှုများ ကြုံတွေ့နေရသည်သာမက ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အချက်လက်များအား အဆီအလျှော်မဲ့ တိုက်ခိုက် စော်ကားနေမှုများလည်း ပို၍ရှိလာနေသည်။ သို့ပါ၍ နိင်ငံသားတိုင်း သာတူညီမျှ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိဟု အခြေခံဥပဒေမှ အတိအလင်းခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းများ ဖြေရှင်းရာတွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တာဝန်ယူမှု-တာဝန်ခံမှု ပိုမိုပြည့်ဝစွာရရှိနိုင်ရန် အရေးကြီးသည်။
ထိုသည်သာမက- လ၀ကဆိုင်ရာ (သွေးနှောများအတွက် ပတ်စ်ပို့၊ မှတ်ပုံတင်၊သန်းခေါင်စာရင်း၊ ပုံစံ (၁၀) ပြောင်း၊ မွေးတိုး၊ လ၀ကထောက်ခံစာ၊ နောက်တိုး NVC. …) ကိစ္စရပ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများ၊ လူမှုရေး နှင့် ပရဟိတ၊ လွယ်ကူစွာ ခရီးသွားလာနိုင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိရေး၊ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်နိုင်ငံရေး စသည်စသည်တို့တွင် မြန်မာ-မူဆလင်ဟု သီးခြားအမြင်ထားခြင်း၊ သတ်မှတ်စည်းကမ်း ပိုတိုးခြင်းမျိူး အလျင်းမရှိစေပဲ နိုင်ငံသားတိုင်း ရရှိရမည့် အခွင့်အရေးတန်းတူ ရှိဖို့လိုသည်။
1.5 မြန်မာ-မူဆလင်ကို အမြင်စောင်းလာစေဖို့..
အမိမြန်မာပြည်ကြီးကို ingredients အစုံပေါင်းစပ်ထားသည့် playdoh အသွင် အထက်တွင် တင်စားခဲ့ခြင်းမှာ အခြားကြောင့်မဟုတ်။ ထို playdoh ကြီးမှ မြန်မာ-မူဆလင်ဆို၍ သီးသန့်ခွဲ ဆွဲထုတ်ပြီး (different ingredient မတူညီတဲ့ ပစ္စည်းစုံတစ်စု)) ပါလို့ ဤ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ပုံဖော်ခံနေရသည်မှာ အများအသိပင်။ သို့သော်လည်းဘဲ မြန်မာ-မူဆလင်တို့သည် ဤမြေ ဤရေ အမိမြန်မာပြည်ကြီးအား အခြားမြန်မာများနည်းတူ သစ္စာရှိစိတ် ချစ်စိတ် တစ်ပြားမျှ မလျှော့ဟု အပြည့်အ၀ခံယူထားကြသည်။
ယခုအခါ မြန်မာ-မူဆလင် ဟု ဆိုသည်နှင့် “ကုလား၊ ဧည့်သည်၊ သွေးနှော၊ နောက်ပိုင်းတွင် ညိုညိုမြင် ခိုးဝင်၊ အမှုအခင်း တစ်ခု မြန်မာ-မူဆလင်နှင့် ပက်သက်ဆက်နွယ်ပါက ကိုးကွယ်+အစ္စလာမ်အမည်ပါ ပူးတွဲဖော်ပြခြင်း အစရှိသည်တို့အား ဤဆယ်စုနှစ် အချိူ့အတွင်း ပိုမိုကြုံတွေ့လာရသည်မှာမလွဲ။ သည့်အတွက် ပြောဖန်များစကားဖြစ် ဆိုသလို အများပြည်သူ၏ မြန်မာ-မူဆလင်တွေအပေါ် စိတ်ခံစားချက်-အမုန်းတရား-အမြင်ကွဲလွဲမှု ပြင်းထန်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်လာနေသယောင် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လာရသည်။ မကြာသေးမီက အမေရီကန်သမ္မတဟောင်း ပြောကြားခဲ့သော အောက်ပါ အဖိုးတန် စကားရပ်လေးကို အမှတ်ရမိသည် (ပုံ-၆)။
နိုင်ငံရေး ပရောဟိတ်ကြီး ပြောကြားခဲ့သော ဤစကားရပ်လေးအရဆိုလျှင် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးထဲမှ မြန်မာ-မူဆလင်ကို သီးခြားအဖြစ် ခွဲမြင်အောင် လုပ်ကြံဖန်တီးနေမှု မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းမိသလို ပြည်သူတွေအကြားလည်း အသားအရောင်၊ ဘာသာတရား၊ လူမျိူးဓလေ့ အခြေခံကြောင့် ဒို့မြန်မာ့သွေးချင်းတွေ စိတ်ဝမ်းမကွဲကြစေဖို့ ဤစာတမ်းမှတစ်ဆင့် ဆော်သြလိုက်ပါသည်။
1.6 စိတ်ဓာတ်ချိူးနှိမ်ခံရမှုမျိူးကို မြန်မာ-မူဆလင်တို့ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရေး…
မိမိတို့သည် မြန်မာ (မြန်မာပြည် နယ်နမိတ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားစုံ လူမျိူးစုံများပေါင်းစုသည့် ဝေါဟာရ)ဖြစ်ပြီး အစ္စလာဘာသာ ကိုးကွယ်ပါက မြန်မာ-မူဆလင် ဟုခေါ်သည်။ သို့သော် တိုင်းပြည်၏ Political Climate ကြောင့် လက်တလော နှိမ်ချရှုမြင် ခေါ်ဝေါ်ခံနေသည့် ထိုသို့သော ခွဲခြားခေါ်ဝေါ်ဆက်ဆံခံနေရမှုများကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျရပါမူ ၂-ခါ ရှုံးသူဖြစ်လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင် ထိုးနှက်စွတ်စွဲ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရလင့်ကစား တစ်ဦချင်းစီရော မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကပါ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ စိတ်မှိုင်မချဖို့လိုသည်။ သို့မှသာ မည်သို့မည်ပုံ ပြန်လည် correct လုပ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
1.7 မြန်မာ့-မူဆလင်တို့အပေါ် အခြားဘာသာဝင်အချိူ့ဘက်မှ သုံးသပ်ချက်အမြင်
မြန်မာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်းမှ အခြားဘာသာကိုးကွယ်သည့် ရောင်းရင်းများ၏ သဘောထားများကို လေ့လာကြည့်သည့်အခါ- ယခင့်ယခင်က မြန်မာ-မူဆလင်တို့၏ ၀တ်စားဆင်ယဉ်မှုများသည် အခြားမြန်မာများနည်းတူ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း ယခုဆယ်စုနှစ်အတွင်း သိသိသာသာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ၀တ်စားဆင်ယဉ်မှုမျိူး မဟုတ်သည့် ခြုံထည်များ ၀တ်ဆင်လာကြခြင်းကို သတိထားမိကြကြောင်း၊ ဤသည်ကို ထောက်ပြ၍ တိုင်းပြည်တွင်း Islamization ကြီး အလုပ်ခံနေရပြီဟု စိတ်ခုလာအောင် တစ်ဖက်မှာ ဖန်တီးလှုံ့ဆော်မှု များစွာရှိနေကြောင်း၊ ဘာသာခြား လူမျိူးခြားဆိုသည့် အမြင်များလည်း တိုးပွားလာနေကြောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနှင့် အခြေခံဥပဒေ အားနည်းချက်များ ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဘာသာရေး လူမျိူးရေး အသွင်ဆောင်သည့် ပဋိပက္ခ တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အချိန်မှီ တားဆီးနိုင်ရန် နှေးကွေးလာစေကြောင်း….စသည့် ကောက်ချက်အချိူ့ကို ကြားသိရသည်။
1.8 မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကွဲပြားနေမှုများအားသုံးသပ်ချက်
မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အစိုးရအသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးနှင့် ပရဟိတအဖွဲ့များ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့များ၊ ပညာရေး ၀န်ဆောင်မှု……. စသဖြင့် မိမိတို့ယုံကြည်ချက် ရပ်တည်ချက်များနှင့် ရှေ့ရှုဆောင်ရွက် နေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အထိုက်အလျှောက် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတော့ မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကော တိုင်းပြည်အတွက်ပါ အကျိူးဖြစ်ထွန်းသည်ဟု ဆိုနိုင်ပေမယ့် အခုလို အစိတ်စိတ်အမွှာအမွှာ ဖြစ်နေခြင်းသည် တိုင်းပြည်နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း တိုးတက်မှုအတွက် ထိရောက်သော အရွေ့တစ်ခု မရှိနိုင်ချေ။
လက်ရှိအနေအထားအားဖြင့် စိတ်ဓာတ် ချိူးနှိမ်ခံနေရမှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရမှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ အနှစ်သာရကို အပြည့်အ၀ မခံစားရမှု၊ တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးမရရှိမှု…တို့ကနေ အမှန်တကယ် ရုန်းထွက်လိုကြလျှင် တစ်ခုသာ လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ မိမိတို့ “လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေမှု ၀န်တာများကို” စွန့်လွှတ်ရန်မဟုတ် မိမိတို့ကိုယ်စီ ရင်ဘတ်ထဲက “မတူဘူးဟူသည့် စိတ်ခံစားချက်များနှင့် အချင်းချင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်သော ပုတ်ခတ်မှုများကို” စွန့်လွှတ်ဖို့လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ ညီညွတ်ခြင်း ဆိုသည့် ကြိုးကို ပူးပေါင်းကိုင်တွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း တိုးတက်မှုအတွက် ထိရောက်သော ၀န်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် အားအင်တစ်ခု ဖြစ်လာပေမည်။ ဆရာကြီးဦးကိုနီ၏ အဖိုးတန်မိန့်ခွန်းကို ကိုးကားပါရစေ (ပုံ-၇)။
2.0 မြန်မာ-မူဆလင်များအား ကိုယ်စားပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေ
2.1 အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ
ယနေ့ခောတ် အဖွဲ့အစည်းများတွင် missions/visions ဆိုတာ ရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အတိုင်း- ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ပရဟိတ….စသဖြင့်တို့ကို မိမိတို့ နိုင်ရာ capacity limit ထဲမှ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင် ကြိုးစားရင်း တိုင်းသူပြည်သား အားလုံးအတွက်ပါ အကျိူးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ခိုင်မာသည့် Solution တစ်ခု လိုအပ်လာခဲ့ပြီ။
အဘယ်ကြောင်ဆိုသော်… ဥပမာ- သာကေတ အာရ်ဗီစာသင်ကျောင်း ပိတ်ပင်ခံရသည့် ကိစ္စကိုကြည့်လျှင် နိုင်ငံတော်မှ ခွင့်ပြုထားသည့် အထောက်အထားစုံရှိပါလျက် ဖြစ်စဉ်အတွင်း အခိုင်အမာ ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းမည့်သူ တစ်စုံတစ်ဦး တစ်ဖွဲ့တစ်သံ မရှိခဲ့ပေ။ ဂေါပကအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူမှ နောက်ပိုင်းတွင် သတင်းမီဒီယာ အချိူ့မှတစ်ဆင့် အင်တာဗျူးလုပ်ပြီး အထောက်အထားစုံနှင့် ရှင်းပြခဲ့သော်ငြားလည်း ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရခြင်းအပြင် မီဒီယာမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် ရှုစားနေသည့် ပရိတ်သတ်အတွက် အစွန်းရောက်များ စွတ်စွဲနေသည့် သို့လောသို့လော သတင်းအမှားများ အမှန်သဖွယ် ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အလားတူ ဗလီ၊ စာသင်ကျောင်း၊ သင်္ချိုင်းနယ်မြေ၊ ကုရ်ဘာနီ ကိစ္စရပ်များစွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဂေါပကများမှ ဦးဆောင်ဖြေရှင်းရခြင်းမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ထိုများသာမက ဘာသာရေးကိစ္စ၊ လ၀ကအရေးကိစ္စ (အရှုပ်အထွေးများ အထူးပြောစရာမရှိ၊ ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားလူငယ်များ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ရာတွင်ပင် သွေးနှောများဟုသုံးနှူံးခွဲခြား)၊ ပညာရေးကိစ္စ (မှတ်ပုံတင်မရှိလို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တက္ကသိုလ် မတက်နိုင်)၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (ဥပမာ- မူဆလင် ဒီမှာဈေးမရောင်းရ၊..)၊ မူဆလင်ကင်းစင်ရွာများပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ ခရီးသွားရေး၊ ပတ်စ်ပို့လျှာက်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ခံစားခွင့်၊ နိုင်ငံ့အရေး…စသည်တို့တွင် ပိုမိုထူးခြားစွာ ခွဲခြားခံလာကြရသည်မှာ လွန်စွာစိုးရိမ်ဖွယ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မြန်မာ-မူဆလင်အဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးပရဟိတအဖွဲ့များမှ မိမိတို့ နိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ခဲ့ကြ စွမ်းဆောင်နေကြဆဲကိုလည်း လေ့လာမိသည်။ သို့သော် အထက်ပါအခြေအနေ ကိစ္စရပ်များအားလုံးကို တစ်ဖွဲ့ တစ်ဦး လူအချိူ့ ကြိုးစားနေရုံနှင့်လွယ်ကူချောမွေ့မည်မဟုတ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ-ဤအခြေအနေတွင် ကိုယ်စားပြုနေသည့် အဖွဲ့ (၅)ဖွဲ့မှ ထိရောက်သည့် ၀န်ဆောင်မှုမျိူး မစွမ်းဆောင်နိုင်ရလေခြင်းဟု မကျေမချမ်းဖြစ် online social media များမှတစ်ဆင့် မြန်မာ-မူဆလင်လူထု အသံများ ထုတ်ဖေါ်နေသည်ကိုလည်း ရံဖန်ရံဖါ တွေ့ရှိရသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ ဗ-မ-က (ဗမာမွတ်ဆလင်ကွန်ဂရက်) အပါအ၀င် မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ရှိနေခဲ့သည်သာမက တိုင်းကျိူးပြည်ပြု ခေါင်းဆောင်ကြီးများလည်း ထွန်းကားခဲ့သည်။ ဥပမာ- အာဇာနည် ဦးရာဇတ်၊ အာဇာနည် ရဲဘော်ကိုထွေး၊ ဦးရာရှစ်၊ ဦးခင်မောင်လတ်၊ ဦးဖေခင်၊ ၀မ်းအိုဝမ်းကျော်ဝင်းမောင်၊ ဗိုလ်မှုးဘသော်၊ ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှုးဘရှင်၊ ဂါဇီဟာရှင်၊ ဦးကိုနီ၊….) တို့အပါအ၀င် အခြားများစွာပါရှိခဲ့ ပါရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ယခုလို ခွဲခြားခံနေရမှုများ၊ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခံနေရမှုများ၊ သာတူညီမျှ အခွင့်အရေးနှင့် အလှမ်းဝေးနေမှုများ၊ မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ရေတိုရေရှည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အရေးတကြီး လိုအပ်လာမှုများ၊ စိတ်ဓာတ်ချိူးနှိမ်ခံလာရမှုများ၊ အနာဂါတ် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ချည်များ မှေးမှိန်လာရသဖြင့် ဘ၀တိုးတက်အောင် ကြိုးစားလိုစိတ်များ လျှော့နည်းလာနေပြီဖြစ်သော မြန်မာ-မူဆလင် သားသမီးများ လူငယ်များအတွက် ဤအချိန်တွင် အလိုအပ်လာဆုံးက လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မြန်မာ-မူဆလင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများစွာ ပေါ်ထွန်းလာရေး ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ- (ပုံ-၈ က)ပါ ကားတာယာ တစ်ဘီးအရွေ့ကဲ့သို့ လက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းကြီးငယ်များ တစ်ခုချင်းစီမှ မိမိတို့ capacity limit နှင့် missions/visions များအရ မြန်မာ-မူဆလင်များ အပါအ၀င် နိုင်ငံနှင့် တိုင်းသူပြည်သူများအား အကျိူးပြုရင်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင်သာ ရွေ့နိုင်ပေမည်။ အကယ်၍ ပိုမိုထိရောက်သော ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် ဆိုရင်တော့ (ပုံ-၈ ခ)ပါ ၁၄-ဘီးကားကြီးတစ်စီးကဲ့သို့ လိုအပ်သည့် အခမ်းဏ္ဍ ၁၄ ခု (ပမာ) ခွဲပြီး တစ်ထီးတစ်မိုးအောက်ကနေ ချိတ်ဆက် ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးသည်သာမက အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်မှ ထိုကားကြီးကို ထိမ်းကျောင်းပေးနိုင်ပါမူ ပိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိ အနှစ်သာရရှိ အကျိူးဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ အရွေ့မျိူးနှင့် အထစ်အငေါ့နည်းပါးပြီး လိုရာခရီးကိုနှင်နိုင်မည်မှာ အသေအချာဖြစ်သည်။ အနာဂါတ် မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမည်။
3.0 အနာဂါတ် မြန်မာ-မူဆလင်အဖွဲ့အစည်း
အနာဂါတ် မြန်မာ-မူဆလင်အဖွဲ့အစည်းကို အောက်ပါကဲ့သို့ တစ်ဖွဲ့တည်းအသွင် ဖန်တီးနိုင်သည်။ အသစ်တစ်ဖွဲ့ထပ်ဖွဲ့ရန် ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ မြန်မာ-မူဆလင်တို့သည် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် အခမ်းကဏ္ဍ အသီးသီးတို့တွင် တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ အများနှင့်ဖြစ်စေ ပက်သက်ဆက်နွယ် ဆောင်ရွက်နေကြသည်မှာ အားရစရာပါ။ သို့သော် အဲဒီ့တစ်ဦး တစ်ဖွဲ့မှာဘဲ လုပ်ဆောင်မှုအင်အားက ရပ်တန့်သွားပြီး မြန်မာ-မူဆလင်ထု large scale အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်မှု ကြိုးပမ်းမှု အကျိူးပြု အသွင်ကို မပေါ်လွင်လာခဲ့ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်- Corporate body ကြီးအသွင် မရှိသေးလို့ပါဘဲ။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇာတ်၏ အချင်းချင်း စည်းလုံးရန်လိုအပ်ကြောင်း ယင်းတော်ညီလာခံတွင် အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သားဖွယ် ပြောကြားခဲ့ဘူးသည် (ပုံ-၉)။
ထိုသို့ဖြစ်လာစေရန်မှာ-လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေသော အစိုးရအသိအမှတ်ပြု ငါးဖွဲ့မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တစ်ခြားမြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပရဟိတများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုအသင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဥပဒေရေး၊ အနုပညာ၊ အားကစား၊ သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်း၊ စသည် စသည့် ဘက်စုံမှ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များ တက်ကြွလူငယ်များ အားလုံးပူးပေါင်း ပါဝင်နိုင်သည့် one-umbrella မိခင်အသင်း လိုအပ်သည်။ ဤနေရာတွင် တစ်ခုသတိချပ်စေလိုသည်မှာ မိမိတို့ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေသော နိုင်ရာစွမ်းဆောင်နေကြသော အဖွဲ့များ၊ different groups များ ကိုပယ်ဖျက်ရန် မရည်ရွယ်ပါ။ မတူညီမှုတွေကို ဖယ်ထား၊ မိခင်အသင်းအတွက် စိတ်ဓါတ်ပွားပြီး ညီညွတ်မှုကြိုးကို ကိုင်ကြစေလိုသည်။ အဖွဲ့အသီးသီး၊ တစ်ဦးချင်းစီတို့၏ ကျွမ်းကျင်ရာ resources များကို အောက်ဖော်ပြပါ ရေးရာများတွင် ပါဝင်ပံ့ပိုးမှု အထူးအရေးကြီးသည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အခမ်းကဏ္ဍ ၁၃-ခု အနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အကြံပြု တင်ပြလိုပါသည်။
3.1 ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခမ်းကဏ္ဍ ၁၃-ခု
၁) ဘာသာရေး။ ။ဗလီ၊စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်-မွမ်းမံ-ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းကိစ္စရပ်များ၊ ဖျက်သိမ်း ပိတ်ပင် ရပ်နားဆိုင်ရာများ ကိစ္စ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခက်ခဲများကြုံလာပါက ဘာသာရေး ဥပဒေရေး ညီညွတ်မှုရှိရေး အမြင်မှား အထင်မှားများအား လျင်မြန်စွာ အသိပေး ဖြေရှင်းနိုင်ရေး၊ ပဋ္ဋိပက္ခလမ်းကြောင်းပေါ် မရောက်သွားရလေအောင် Professional ဆန်ဆန် ထိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် သူများအားလည်းပဲ ဖိတ်ခေါ်တွဲခေါ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ အာဏာစွဲ ဒေသစွဲ မာန်မာနစွဲ တို့ကို ခ၀ါချဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
“ယဉ်ကျေးလိမ္မာ အေးချမ်းသာ၊ ဘာသာအဆုံးအမ လိုက်နာကြစို့”
၂) နိုင်ငံရေးရာ။ ။နိုင်ငံရေးအင်အားစု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်အောင် ကြိုးစားဖော်ဆောင်ရမည်။ ဤနိုင်ငံရေးအင်အားစုဆိုသည် မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံး၏ Energy, Talent, Capability, Strength, Roles and Responsibilities တို့ကို မြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်ရေးအတွက် အဖိုးတန် ထောက်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် အလွန်အရေးပါသော ရေးရာတစ်ခုဖြစ်လာသင့်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နိုင်ငံရေး (တစ်နည်း။ နိုင်ငံ့အရေး)ဆိုသည် နိုင်ငံဘက်စုံတိုးတက်ရေးကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ၀င်ရောက်ပါဝင်နိုင်ခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည် ပြည်သူ မြန်မာမူဆလင်လူ့အဖွဲ့အစည်း အားလုံး ချိတ်ဆက် တိုးတက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီ့အတွက် မြန်မာ-မူဆလင်များထဲမှာ နိုင်ငံရေး သုတေသီများ၊ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင်း သုံးသပ်ဆွေးနွေး တွေးခေါ်ဖလှယ်နိုင်မည့် နိုင်ငံရေးသမားကောင်း များစွာ မွေးထုတ်နိုင်ရမည်။ “တိုင်းပြည် လူမျိူး အကျိူးဖြစ်ထွန်းဖို့၊ နိုင်ငံရေးသမားကောင်းများ မွေးထုတ်စို့”
၃) လူမှုရေးရာ။ ။စိတ်ဝင်တစား ကိုယ်ကျိူးမဖက် အများအကျိူးငဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ပရဟိတ လုပ်နိုင်သူများ မွေးထုတ်ရမည်။ တစ်ခြား ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းများ ဘာသာရေး လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထဲထဲဝင် Engage လုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ “သွေးချင်းမြန်မာတို့ အဆင်ပြေဖို့၊ လူမှုဝန်တာ ဆောင်ရွက်စို့”
၄) ကျန်းမာရေးရာ။ ။ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်ပေးနိုင်သော ဆေးရုံ ဆေးခန်းများ၊ သဘာဝဘေးအန္တရယ် ကျရောက်ချိန် ၀င်ကူနိုင်မည့် စေတနာ့ ၀န်ထမ်းကောင်းများ၊ တိုင်းသူပြည်သားတွေ မကြာခဏကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် ဖြစ်လွယ် ကုလွယ် ရောဂါများ Outbreak (ဥပမာ- သွေးလွန်တုတ်ကွေး၊ ရေ လေ နေပူဒဏ်တို့ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သော ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်လာလျှင် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးနိုင်မှု၊ အသိပညာဖြန့်ဝေမှု၊ သွေးလှုနိုင်မှု၊ ဆေးရုံကားဝန်ဆောင်နိုင်မှု၊ နာရေးကူညီမှု) အခြား ကျန်းမာရေး ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေသော အသင်းအဖွဲ့များနှင့်လည်း Active Engage လုပ်ထားနိုင်မှုတို့ကို အကျိူးရှိရှိ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“ပြည်သူတစ်ဝှမ်း စိတ်ရွှင်လန်းဖို့၊ ကျန်းမာရေးရာ အလေးပေးစို့”
၅) ပညာရေးရာ။ ။ပညာတတ်များ၊ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကောင်းများ၊ သမိုင်းပညာရှင်များ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအကျိူး ရှေ့ရှုထမ်းဆောင်နိုင်မည့် သားကောင်း သမီးကောင်းများ ပျိူးထောင်နိုင်ရမည်။ “အနာဂတ်သာယာဖြောင့်ဖြူးဖို့၊ ပညာတတ်အောင် ကြိုးစားစို့”
၆) လ၀က ရေးရာ။ မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အကြီးမားဆုံး ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခက်အခဲများမှာ အထက်တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း “ကုလား” “သွေးနှော” “လူမျိူးခြား” “ဧည့်သည်” “ညိုညိုမြင်…ခိုးဝင်”… စသည့် ပုံဖော်ခံနေရမှုတွေကြောင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများမှ ပေါက်ဖွားကြီးပြင်း ဤမြေမှာနေ ဤရေသောက်ဟု ဆိုကြသည့် အများနည်းတူ မြန်မာဆိုသည် ဖြစ်လင့်ကစား (မူဆလင်) ဆိုသည့် ဝေါဟာရ ပေါင်းလိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အသင်သည် ခုလေးတင် မြန်မာပြည်တွင်း ၀င်ရောက်နေထိုင်သူအသွင် Label မျိူးစုံအတပ်ခံရ သူစိမ်းကြည့်ကြည့်ခံရ အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ပုံစံ-၁၀၊ ပတ်စ်ပို့၊ ထောက်ခံစာ စသည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လ.၀.က)ဆိုင်ရာများတွင် အခက်အခဲစုံကြုံတွေ့နေရသည်။ ဤသည်တို့ကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းနိုင်ရေး မြန်မာ-မူဆလင်ကို သီးသန့် လူတန်းစားတစ်ရပ်အဖြစ် အမြင်သက်ရောက်နေမှုမှ Correct လုပ်နိုင်ရေးတို့အတွက် လ.၀.က ဆိုင်ရာ ဥပဒေဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ဤ လ.၀.က ရေးရာမှ အကျိူးပြုဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
“ခွင့်တူညီမျှ ဖြူစင်ဝါဒရှိရေး၊ လ.၀.က မဏ္ဍိုင် အလေးပေး”
၇) သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးရာ။ ။မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ တိုင်းပြုပြည်ပြု ဆောင်ရွက်နေမှုအစုံ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခြေအနေစုံကို အများပြည်သူ ရှင်းလင်းစွာသိနိုင်ရေးနှင့် အမြင်ရှင်းနိုင်ရေးတို့အတွက် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သတင်းဆက်သွယ်ထားနိုင်မှုက လွန်စွာအရေးကြီးသည်။ ထင်ယောင်ထင်မှား ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်အောင် သတင်းအမှားဖြန့် ကြံစည်လှုံ့ဆော်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါကလည်း အလျင်မှီ ကာကွယ်နိုင်ရာရောက်မည်။ ပြည်သူနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်မည့် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်များ (စာစောင်၊ ရေဒီယို၊ သတင်းမီဒီယာ၊ Social Media၊ Facedbook၊ Youtube၊ Twitter) များတည်ထောင်ရန်လိုအပ်သည်။ “သတင်းမီဒီယာ ပြည်သူ့ နား မျက်စိမို့၊ ပြန်ကြားရေးမဏ္ဍိုင် ပဲ့ကိုင်စို့”
၈) စီးပွားရေးရာ။ ။လက်ရှိတွင် မြန်မာ-မူဆလင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရှိသည်ကို ၀မ်းမြောက်စွာလေ့လာမိသည်။ ဤအသင်းသည် ယခုပေါင်းစုဖြစ်ပေါ်လာမည့် မိခင်အသင်းကြီး၏ စီးပွားရေးရာ အခမ်းဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် လွန်စွာကောင်းပေလိမ့်မည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မြန်မာ-မူဆလင် လုပ်ငန်းရှင်များ ထက်မြတ်စီးပွားရှင်များ ပိုမိုပေါ်လာနိုင်ရေး အချင်းချင်း Network ကောင်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်လာနိုင်ရန် ကြိုးစားရပေမည်။ “တိုးတက်ကြီးပွား အာရှကျားဖြစ်ဖို့၊ ညီညာစီးပွား ဖေးမစို့”
၉) လူငယ်ရေးရာ (Youth Wing)။ ။တိုင်းပြည် လူ့အဖွဲ့အစည်း တိုးတက်မှု၏ အနာဂါတ်သည် လူငယ်များ မည်သည့်အတိုင်းအတာထိ လျှောက်လှမ်းလာနိုင်သည်ဆိုသည့် အခြေအနေပေါ်မူတည်သည်။ စိတ်ဓာတ်တွေကျ အနာဂါတ်တိုးတက်မည့် လမ်းစမမြင်၊ မူဆလင်ဖြစ်နေသည့်အားလျှော်စွာ ပညာရေးနှင့် အခြားမိမိစိတ်သန်ရာ ကြိုးစားဖို့ မှတ်ပုံတင်ရရေးတောင် မလွယ်ကူ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေက အလွယ်လေး အနားရောက်လာ၊ Facebook ခောတ်ကြီးမှာ ရည်းစားစာ လိုက်ပေးစရာမလိုဘဲ အလွယ်လေး စောစောအိမ်ထောင်သားမွေးပြု၊ သူလိုကိုယ်လို တစ်ရက် 5000 ကျပ်အတွက် နေ့တစ်ဓူဝရုန်းကန်၊ ဒီလိုနဲ့ ဘ၀လေးတွေ အညွန့်တုန်း ဖြစ်သွားနေမည်ကို မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လက်ပိုက်ကြည့်နေ၍မရ။ စာရိတ္တကောင်းမွန်သည့် အနာဂါတ်ကြယ်ပွင့်များ ဖြစ်လာကြရေး၊ လူငယ်များတိုးတက်ရေး၊ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိူးပြုနိုင်ရေး ဘက်ပေါင်းစုံမှ မြေတောင်မြှောက်ပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားရမည်။
“ပြည့်အနာဂါတ် ထွန်းတောက်ဖို့၊ လူချွန်လူမွန် ပျိူးထောင်စို့”
၁၀) စာပေ အနုပညာ ရေးရာ။ ။မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်း ပြည်သူတို့၏ စိတ်ခွန်အား၊ အသိပညာခွန်အား၊ ဘ၀ခွန်အား၊ ကြည်နူးပျော်ရွှင်မှု ခွန်အားတွေဖြစ်စေဖို့ အဓိက စွမ်းဆောင်ရှင်များတွင် စာပေပညာရှင်များ၊ အနုပညာရှင်များ၏ အခမ်းဏ္ဍသည် လွန်စွာ အရေးကြီးသည်။ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာ စာပေဆိုင်ရာ ပညာရှင်၊ ဟောပြောသူ စသည်တို့သည် ပြည်သူများ၏ Role model, Public influencer များဖြစ်သဖြင့် ထိုသို့သော ထွန်းပေါက်သူများကို မွေးထုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်။
“ပြည်သူ့နီတိ လင်းဝင်းစေဖို့၊ စာပေ အနုပညာဖြင့် စွမ်းဆောင်စို့”
၁၁) အားကစားရေးရာ။ ။တိုင်းပြည်ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည့် ထွန်းပေါက်အားကစားသမားများ၊ ဂုဏ်ဆောင်နေဆဲ အားကစားသမားကောင်းများစွာ မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ရှိခဲ့ ရှိနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ အားကစားသမားကောင်းများ ဘက်စုံမှ ဆက်လက် ပေါ်ထွန်းလာနိုင်ရေးအတွက် ပြုစုပျိူးထောင်ရမည်။ “မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာလွှမ်းစေရမည်” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ် အကောင်အထည်ပေါ်လာရေး အချိန်မနှောင်းသေးပါ။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့စည်းကြီးအတွင်း ပြောင်မြှောက်သော ရွက်ပုန်းသီး အားကစားသမားကောင်း များစွာရှိသည်။ တန်းတူညီမျှ အရည်အချင်းပြသခွင့် ပိုမိုရှိလာရေးနှင့် ရေမြင့်လေ ကြာတင့်လေ ဆိုသလို တော်သူကို မြေတောင်မြှောက်ပေးဖို့လိုမည်။ သို့မှသာ တိုင်းပြည်ဂုဏ်သတင်း ကမ္ဘာတစ်ခွင် လင်းစေမည်မို့ တတ်ကျွမ်းအားကစားသမားကောင်း များစွာ ပေါ်ထွန်းလာရေးနှင့် အခက်ခဲမရှိ မြေတောင်မြှောက်ပေးနိုင်ရေးတို့ကို ကြိုးစားရမည်။
“ပြည့်ဂုဏ်သတင်း ကမ္ဘာတစ်ခွင်လင်းဖို့၊ အားကစားသမားကောင်း မြေတောင်မြှောက်စို့”
၁၂) ဥပဒေရေးရာ။ ။မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဥပဒေရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် အကြံပြု ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အထူးလိုအပ်သည်။ တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ ပြည်သူပြည်သားများ ထိရောက်သည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၏ အကာအကွယ်ရရှိနိုင်ရေး အစိုးရနှင့် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ “တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် စဉ်တည့်မတ်ဖို့၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်ထိမ်းညှိစို့”
၁၃) ကျင့်ဝတ်ထိမ်းသိမ်းရေးရာ။ ။ရေးရာဌာနတိုင်းတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် Guidelines များ ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ကျင့်ဝတ်ထိမ်းသိမ်းရေးကော်မတီ အနေဖြင့် ဤမိခင်အသင်းကြီး၏ ရေးရာဌာနဆိုင်ရာအားလုံးကို အကျင့်ပျက် ခြစားမှုကင်းပြီး စည်းကမ်းတကျဖြစ်အောင် ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ သို့မှသာ ကိုယ်ကျိူးမဖက် အများအကျိူး ဌဲ့ကွက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ရေးရာ Team များအဖြစ် ကမ္ဗည်းတင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ-မူဆလင်လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက်သာမက တိုင်းပြည်အတွက်ပါ အကျိူးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မည်။
“ကျင့်ပျက်ခြစား ပိုးကိုနိုင်၊ အသင်းအဖွဲ့အိမ်တိုင် ဘယ်မယိုင်”
3.2 အဖွဲ့အစည်း Structure
အချူပ်ဆိုရသော်- တိုင်းပြည်အတွက် အဖိုးတန်ထောက်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်လာစေမည့် မြန်မာ-မူဆလင်အဖွဲ့အစည်းကြီး ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အထက်ပါ အချက် (၁၃)ချက်ကို ပဏာမအနေနဲ့ ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံဥပဒေပါ ခွင့်ပြုချက်အတိုင်း မြန်မာ-မူဆလင်များလည်း ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်ရရှိလာရေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။ အခြားလိုအပ်ချက်များစွာကိုလည်း ထိရောက်သော ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဘာသာစုံအဖွဲ့အစည်းများ၊ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအားလည်း ပိုမိုလျှော်ကန်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်ပေလိမ့်မည်။ အဖွဲ့အစည်း Structure (ပုံ-၁၀) တစ်ခုလုံးကို coordinate လုပ်နိုင်ဖို့နှင့် ရေးရာဌာနများအကြား cooperate လုပ်နိုင်အောင်၊ တစ်ဌာန လိုအပ်သည့် အကူအညီကို အခြားဌာနတစ်ခုက ကူညီပေးနိုင်အောင် ပိုမို Effective ဖြစ်လာအောင် လုပ်ဆောင်ရမည်။
ပုံ(၁၀)- အဖွဲ့အစည်း structure (အကြံပြုချက်သာ)
အဖွဲ့အစည်း၏ Clear Missions/Visions ထားရှိဖို့ လိုအပ်သည်။ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ ခွန်အားသည် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းတွင်ရှိသည်ကို မြန်မာ-မူဆလင်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ မြန်မာ့သမိုင်းပညာရှင်ကြီး ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးဘရှင်မှ အောက်ပါအတိုင်း အမှာထားခဲ့သည် (ပုံ-၁၁)။
ပုံ(၁၁)- ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးဘရှင်
3.3 ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦးစီ၏ အရည်အချင်း
ခေါင်းစဉ် အမှတ် (2.2) တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦးသည် ၁၄-ဘီးကားကြီးကို အန္တရယ်ကင်းဘေးရှင်းအောင် မောင်းနှင်မည့် ဒရိုင်ဘာကောင်းသဖွယ် ဖြစ်ရမည်။ အရည်အချင်းကောင်းများစွာ ရှိဖို့လိုအပ်သည်။ မြန်မာဆန်ရမည်။ ခောတ်ပညာတတ်ရမည်။ မြန်မာ့အရေး အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို Up to Date နှံ့စပ်ရမည်။ သတ္တိရှိရမည်။ ရဲရင့်ပြတ်သားပြီး ပြောရဲဆိုရဲ ရှိသူဖြစ်ရမည် (မာကျောခက်ထန်ဖို့မလို)၊ ချမ်းသာဖို့မလို၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးအကြား သဟဇာတဖြစ်ရေး၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး၊ မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဘက်စုံရေးရာ တိုးတက်ရေးတို့ကို ရှေ့ရှုမျှော်မြင်၍ အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်မှုပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ ပါဝါ အာဏာ နောက်လိုက်သူ မဖြစ်စေရ။ မိမိကိုယ်ကျိူးစီးပွား ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှု အကျိူးဖြစ်ထွန်းမှုမျိူးကို ဦးစားမပေးရ။ သောကထား ကြိုးစားသူ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ ဥပဓိရုပ်ကောင်းမွန်ပြီး လူချစ်လူခင်ပေါသူ၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူ ဖြစ်ရမည်။ အထက်ဖားအောက်ဖိ၊ သစ္စာသမာဓိရှိပြီး ငါ ဆိုသည့် အတ္တမာန ကင်းရမည်။ မြန်မာစာပေ-စကား ပြောင်မြောက်စွာ ရေးဖတ်ပြော ကျွမ်းကျင်ရမည်။ ရာဇ၀တ်မှုကင်းရှင်းရမည်။ အခြားသော သင့်တော်မည့် အရေးပါမည့် အချက်များ လိုအပ်ပါက ဖြည့်စွက်နိုင်သည်။
မြန်မာ-မူဆလင်တို့သည် သမိုင်းစဉ်ဆက် အမိမြေကို သစ္စာရှိစွာ မိမိတို့နိုင်ရာ့ဝန်ထမ်း အကျိူးပြုခဲ့ကြသည်။ မြန်မာဟု ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ အေးအတူပအမျှ ပြည့်အရေး အတက်အကျဟူသမျှတို့တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြပေမယ့် 1962 ဦးနေ၀င်း အာဏာသိမ်းပြီးနှောင်းပိုင်း ဘာသာတွေအကြား လူမျိူးတွေအကြား တိုင်းရင်းသားတွေအကြား ခွဲခြားအုပ်ချူပ်ရင်း အာဏာစက် ရှည်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲရလာဒ်တွေကတော့ ကနေ့ မြန်မာ-မူဆလင်ရယ်လို့ မြင်လိုက်လျှင်ဖြင့် အရောင်မျိူးစုံခြယ်သထားသည့် အသွင်မတူသည့် အမြင်တွေ ပြည်သူအချင်းချင်းအကြား တိုးပွားလာခဲ့သည်မှာ လွန်စွာဝမ်းနည်းစရာ။ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာတွေအကြား ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ အသားအရောင်တွေ မည်သို့ပင်ကွဲစေ မြန်မာဟာ မြန်မာပါပဲဆိုတဲ့အသိ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးစိတ်မှာ ခံယူလာဖို့ အချိန်ယူရပေဦးမည်။ သို့သော် လက်မှိုင်ချ စိတ်ဓါတ်ကျ၍မရ။ “ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး” ပေါ်လာနိုင်ခဲ့ခြင်း သမိုင်းသက်သေပါ။ ဤမှာဘက်ခောတ်မှာလည်း မြန်မာတွေအချင်းချင်း ညီညွတ် မျှတ သဟဇာတဖြစ် ချစ်ခင်စွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်ကြရေးအတွက် “ဒို့မြန်မာအစည်းအရုံး” ဖြစ်လာအောင် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးက ကြိုးစားရပေမည်။ The Power of Unity, Harmony, and Diversity ဖြစ်ပေါ်လာရေး ခိုင်မာသော သံန္နိဌာန်ချမှတ် ဖော်ဆောင်ရမည်။
မြန်မာ-မူဆလင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကြုံတွေ့နေကြရသည့် အခက်အခဲများ ပြေလည်စေရေးနှင့် ပိုမိုစည်းလုံးညီညွတ်သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးအသွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရေးအတွက် မတူညီမှုများကိုဘေးထား တစ်ဦးချင်းနိုင်နိုင် တစ်စုချင်းနိုင်နိုင် နိုးနိုးကြားကြား တက်တက်ကြွကြွ စွမ်းအားဖြည့်ဆောင်ရွက်သင့်သည့် အနာဂါတ်အဖွဲ့အစည်းအသွင်နှင့် အခမ်းကဏ္ဍ ၁၃-ခု တို့ကိုလည်း အကြံပြုတင်ပြရင်း…………….ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာမည့် အနာဂါတ် မြန်မာ-မူဆလင်အဖွဲ့အစည်းကြီးသည် မြန်မာပြည် တိုးတက်မှုအတွက် အဖိုးတန် ထောက်တိုင်တစ်တိုင် ဖြစ်လာနိုင်ပါစေလို့။။။။။။။
Mobile:+614 5138 9185